10-ka Fikrado Ganacsi Aad Bilaabi Karto Adigoo Gurigaaga Jooga | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — April 19, 2019
Sanadka kasta malaayiin qof oo ku kala nool adduunka dacalladiisa ayaa bilaaba ganacsiyo cusub. Dadkaasi waxyaabo badan ayay ku kala duwan yihiin. Tusaalle ahaan, waxay ku kala duwan yihiin waxa ku dhiiro-geliyey in ay yagleelaan ganacsi cusub, sida ay ahayd xaaladdoodu kahor inta aysan bilaabin ganacsiga cusub duruufaha ka hor yimaada iyo sida ay u wajahaan.
Isbeddellada ku dhaca bulshada waxaa marmar sababa in dad badan iskiis u shaqeyste noqdaan, midka ugu caansan isbeddelladaasi, daraasado fara badanna lagu sameeyay ayaa ah waxa loogu yeero guur-guurka (mobility).
Guurguurka oo noqon kara mid muuqda sida in lagu guuro meel oo loo guuro meel kale, ama mid aan muuqan sida isbeddellada ku yimaada qaabka mujtamacu u dhaqmo ayaa labaduba qayb weyn ka qaataan iskiis u shaqeystennimada.
Waxaa wanaagsan inaad in badan raadiso waxaad rabto inaad ka ganacsato, maxaa yeelay marwalbo oo aad ogaato baahida loo qabi karo ganacsiga aad rabto inaad bilawdo waxay kuu sahlayso inaad in badan ku guulaysato ganacsiga, haddii aad noqoto shaqsi ay la soo deristo guulo badan waxaa ku jeclaado bulshada adiga kugu heeraarsan.
Hadaba, waxaan isweydiiyay maxaa bulshadeenna Soomaaliyeed ay ugu badan yihiin dadka fadhi-kudhega? Aqristoow waa xaqiiq jirta adigaba waad ila ogtahay arrintaas. Halkaan waxaan ku soo koobay fikrado ganacsi uu qofwalbo bilaabi karo.
Xisaabinta Ganacsiga yar-yar ee loo yaqaano ‘bookkeeping small business’ ayaa noqon kara hab aad u fiican oo aad ku shaqeysan karto adigoo gurigaaga jooga oo aadan u baahnayn inaad xafiis ka furato magaalada. Xirfadaan xisaabinta ayaa kamid ah xirfadaha ugu shaqo abuurista fiican.
Hadaba, waa maxay xirfadaan xisaabinta?
Xisaabinta’ waa aasaaska nidaamka xisaabinta shirkadda. Dadka ku shaqeeyo xirfadaan waxay masuul ka yihiin diiwaangelinta iyo kala saarista macaamilka xisaabaadka shirkadda ganacsiga iyo farsamooyinka ku lug leh diiwaangelinta macaamiladaas.
Haddii aad tahay ganacsade, waa in aad sameysatid habka xisaabintaada gaarka ah ama waa inaad shaqaaleysiisaa qof kuu sameeyo xisaabinta. Waa lagama maarmaan inaad hesho qof yaqaano xirfadaan, waa haddii aad filayso koritaan xagga dhaqaalaha shirkadaada, waxaad kireysan kartaa koontaroole si aad u maamushid maareynta maaliyadda iyo xisaabinta.
Wariyaha Xorta ah ‘Freelance Writing
Ma xiiseyneysaa inaad shaqeysato adigoo gurigaaga jooga oo aad noqoto qof xor ah? Qoraalka wariyaha xorta ah, wuxuu noqon karaa ganacsi yar oo aad u fiican, waa haddii aad tahay qoraa xirfad leh.
Hawshaan wariyaha xorta ah waa shaqo u baahan dhabar adayg badan. Warbaahinta Soomaaliyeed iyo kuwa caalamka ayaa aad u iibsada qoraaladda ku saabsan siyaasada, afgobaadsi, xasaanadda danjirenimo, iyo dabagalka dowladaha iyo madaxda.
Sidoo kale waxaa jiro ganacsato u baahan in loo qoro warbixinta sanadlaha ah, haddii aad aqqoon duruqsan u leedahay siyaasadda iyo afgobaadsiga ‘diblomaasiyada’ waxaad sameysan kartaa website oo aad ku bixini karto koorsooyin si lagaaga iibsado aqqoontaada, waxaad kale oo aad qori kartaa dhibaatooyinka haysata siyaasiyiinta iyo sidda ay ugu gudbi karaan. Waana shaqo galabyadii illaa habeenkii aad ka shaqeyni karto adigoo shaqadaada caadiga ah haysto. Qofka bilaaba ganacsigaan wuxuu helayaa waqti uu kula baashaalo asxaabtiisa, qoyskiisa iyo wuxuu helayaa wakhti uu ku abuuro bulsho wanaagsan oo isdhex-gal leh.
Daryeelka Caruurta Guriga
Daryeelka caruurtu waa arrin muhiim u ah waalidiinta shaqeeya meel kasta ay dunida ka joogaan. Haddii aad shaqeyso oo aad carruur leedahay, mid ka mid ah su’aalaha ugu weyn ee aad u baahan tahay inaad ka jawaabto waa: Yaa daryeelaya caruurtayda markaan shaqaynayo?
Haddii aad jeceshahay caruurta, adigaa mas’uul ka ah, waxay leeyihiin tixraac iyo nidaamyo loo maro xanaanaynta caruurta oo aad ku xakameyn karto xaaladaha culus ee soo wajihi karo caruurta. Ganacsiga xanaanada caruurta ee guriga ku yaal wuxuu noqon karaa ganacsi yar oo aad u fiican oo aad ku bilowdo.
Qiimaha ganacsigaan bilawga ah wuxuu awood u leeyahay inuu noqdo mid ballaaran, iyadoo ay ku xiran tahay sida gurigaaga loogu diyaariyey ganacsigaan, halkaas oo ay carruurtu heli doonaan waxay u baahan yihiin in la sameeyo sidda badbaadinta iyo da’da ku habboon haddii aanay hore u jirin. Tan waxaa ka mid ah deyrkaaga, maadaama ay caruurtu u baahanyihiin in ay ku ciyaaraan banaanka/dibadda. Qalabka ay ku ciyaaraan caruurta, sidoo kale qalabka ciyaaraha gudaha iyo dibaddaba ayaa u baahnaan doona in la soo iibsado.
Sidoo kale shuruudaha ruqsadaha ayaa noqon kara mid xadidan. Ka hor intaanad go’aansan inaad bilowdo ganacsi xanaano caruureed, iska hubi shuruudaha gobolkaaga.
Tusaalle, la xariir Waaxda Shaqada iyo Warshadaha Gobolka banaadir si aad u heshid macluumaad ku saabsan barnaamijyada iyo adeegyada gobolka. Nidaamyada u yaala Waaxda Shaqada iyo Warshadaha ee wadamada caalamka waa ay kala duwan yihiin. waxayna ku xeran yahay marxalada uu dalka uu ku sugan yahay markaas.
Ma leedahay dareen rabitaan ah inaad abuurato ganacsi ku salaysan farsamada gacanta? Ganacsatada yar-yar ee ganacsiga farshaxanimada waxaa ka mid ah wax walba oo ka yimaada sawirada farshaxanka. Badanaa, ganacsatada farshaxanka xirfadlayaasha ah waxay u shaqeeyaan si madaxbannaan. Farshahanka wuxuu badanaa ku tiirsan tahay sahayda deegaanka iyo taageerada bulshada si ay u illaaliyaan saldhigga macaamiisha.
Hawlaha farsamada gacanta waxaa ka mid ah qaabeynta, naqshadeynta, abuurista, qaybinta iyo iibinta alaabada.
Qiimaha aad ku bilaabi karto ganacsigaan farsamada gacanta ma ahan maalgelin kaaga baxayso lacag badan, maalgelintiisa waa mid hooseysa, dadka badankooduna waxay abuuri karaan ganacsigaan ayagoo guryahooda jooga, taas oo ka dhigaysa xarun la heli karo oo la awoodi karo in laguugu imaado gurigaaga.
Waraaqaha Daaweynta Caafimaadka
Qoraalka daaweynta caafimaadku ‘medical transcription’ wuxuu ka kooban yahay warbixinno la xiriira dhakhaatiirta iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo u wareejinta dukumiintiyada qoran.
Qoraalka dhakhtarku wuxuu ka kooban yahay warbixinno diiwaangashan oo ka socda dhakhtarrada iyo xirfadlayaasha kale ee caafimaadka, iyaga oo u rogaya dokumantiyo qoraal ah oo noqda qayb joogto ah oo ka mid ah diiwaanka caafimaadka bukaanka.
Qaar ka mid ah bukaan-socod-eegeyaasha caafimaad waxay u shaqeeyaan qaab ka duwan marka ay u shaqeynayaan isbitaalada, Kuwa kale waxay la shaqeeyaan kuwa adeegyada bixiya, waraaqo caafimaad oo loogu talagalay dhaqanka iyo isbitaallada. Caadiyan waxay la shaqeyaan dhakhaatiirta, laakiin marka aad bilaabayso ganacsiga noocaan oo kale waa ay ka duwan tahay marka aad isbitaal ka shaqeynayso.
Marka aad isbitaal ka shaqeynayso waxaad tahay qof meesha loo diro ama waxa loo diro sameeyo, balse marka aad noqoto qof hawshiisa u gaar ah waxaa ku horyaallo inaad macaamiil raadsato sidoo kale qaarada Yurub, qaasatan inta aan arkay wadamada Skandinevian-ka waxaa ka jirta baahiyo badan. Maxaa yeelay qaarada Yurub waxaa aad ugu soo badanaayo dadka hawl-gabka ah.
Waxa kale oo suurtagal ah in aad si madax-bannaan u shaqeyso, xaqiijiso saldhiggaaga macaamiisha. Haddii aad ku raaxaysan karto in aad naftaada ku shaqeyso jawi deggan, waqti dheer oo xor ah, fursadaan waxay kuu noqon kartaa fursad wanaagsan oo aad ku bilaabi karto ganacsigaan.
Macalin Qaas ah
Haddii aad tahay qof jecel innuu dadka wax baro, waxaa jiro caruur badan oo u baahan in guriga wax loogu dhigo iskuulka kadib, waxaa kaloo jira arday dugsiga sarre dhigto oo maraayo sanadka ugu dambeeyay, kuwaasoo u baahan inay aadaan jaamacad sanadka soo socda, waxaad ka caawin kartaa cashirada xisaabta, sayniska, kimistiriga, ingariiska iwm. Uma baahnid inaad meel furato oo aad kiro bixiso, waxaad ugu tagaysaa guryahooda mise adigaba wey kuu imaani karaan oo gurigaada ayaad wax ugu dhigaysaa.
Haddii lagu arko inaad hawshaas qabanayso waxaa suurta gal ah in iskuulada qaar kusoo raadsadaan si ay kaaga dhigtaan macalin wax bara ardayda. Dabcan sidda aan wada ogsoonahay dalka waxaa ka jira baahi loo qabo macalinimada, qaasan kuwa guryaha caruurta ku caawiya. Fursadahaan ayaa aad u raadiya dadyowga Soomaaliyeed oo kunool qaarada Yurub, si ubadkooda u gaaraan caruurta kale ee ajaanibta wax la barato.
Fursadaan ayaa noqon karta fursad qaali ah waliba xilliga kuleylaha, maxaa yeelay waxaad haysataa wakhti kugu filan si laguu barto marka hore ee aad bilawga tahay.
Tani waa fikrad ganacsi oo weyn ee macalimiinta ama qof kasta oo leh khibrad waxbaris, lehna aqoon gaar. Sidoo kale dhaqaalaha ku baxaayo inaad bilawdo ganacsigaan ma ahan mid u baahan qarash badan ee waa in lagu barto oo la ogaado inaad tahay macalin maadooyinka uu dhigo ku wanaagsan ardaydiisana indhaha u furi kara.
Maktabada Daabacaada Buuggaagta
Haddii aad si fiican u taqaano luuqada afka Soomaaliga ah, waxaad furan kartaa ganacsiga daabacaada buuggaagta. Dalkeena waxaa ku soo badanaayo qorayaasha Soomaaliyeed oo aad wax u qoro wakhtiyadaan dambe.
Dhammaan gudaha Soomaaliya waxaad arkaysaa bandhigyo kala duwan sida Mogadishu Book Fair, Hargeysa, Garowe, Kismaanyo iyo meelo badan oo sanadkii intaasoo jeer lagu soo bandhigo buuggaagta ay qoraan aqoonyahanada iyo dhalinyarada qalinka la deriska ah.
Ganacsigaan waa ganacsi u baahan khibrad fiican. Maktabadaha daabaco buuggaagta afka Soomaaliga ku qoran ayaa ku yar dalkeenna, inta ku taalo dalka waxay ku daabacaan qiimo qaali ah maxaa yeelay waxay ogyihiin inaysan ku jirin tartan adag. Qaarkiis waxaa lagu xantaa inaysan si fiican wax u daabicin. Haddii aad furanayso ganacsigaan waxaad u baahan tahay inaad afka luuqadaada hooyo si fiican u taqaano si aad buuggaagta u tifatiri karto, sidoo kale aad la timaado daabacaad qurxoon.
Haddii lagu arko inaad si fiican u daabacdo buuggaagta waliba aad si fiican u tifatirto qoraalada ku qoran buuggaagta waxaad ku guulaysan kartaa xaddad balaaran oo macaamiil cusub ah, waliba si joogta ah. Sidoo kale uma baahnid inaad xarun ka furato magaalada. Waxaad xayaysiin ka sameyn kartaa baraha bulshada adigoo sameynsan kara telefoon –qaas kuu ah, emailada lagaaga soo xariiri lahaa iwm. Goobta gurigaaga waa inay noqotaa goob qaas kuu ah oo aad ugu tala gashay qabashada shaqadaan. Ogaaw, waa shaqo baahideedu ay jirto hadda, waliba xiligaan oo ay goobaha waxbarashada iyo jaamacaduhu samaynayaan kobac aad u sarreeya
Lataliye Baarista Dagalka *SEO Consultant
Lataliyaha baarista dagalka ‘search engine optimization’ (SEO) waa qof khabiir ku ah hababka cilmi-baarista ee internetka, kaas oo ka caawiya website-yada macmiilka in si fudud loo helo.
SEO (Search Engine Optimization) waa u dabrida bogaga internet-ka ama dagalka si uu u noqdo mid la heli-og, oo bogaadu ka soo muuqdo tubta sare liiska natiijada ka dhalata marka uu qof weydiiyo erey/ereyo mashiinada raadinta sida google, yahoo ama bing, iyadoo la kordhinaayo muuqaalka iyo qiimeynta goobaha shabakada, taraafikada shabakada, iibka, iyo wax soo saarka ayaa guud ahaan kordhaayo.
Isku day inaad soo qortid wax naadir ah ama ku cusub bulshada, qiimo leh, la fahmi karo, aan laga soo guurin bog kale, ka duwan waxyaaabaha ay qoreen bogaga kale. Taas ma fududa, waxay u baahan tahay waqti iyo dadaalkeeda. Balse waa laguu mahad celin hadii aad la timaado wax la jeclaysto.
Khabiirka SEO ah ayaa falanqeyn ku sameeya yoolalka macaamiisha, istaraatiijiyada suuq-geynta, bartilmaameedka, iyo shabakada si loo go’aamiyo istaraatijiyada.
Mashiinada raadinta (search engines) ma aqrin karaan sawirada, sidaasi darteed kolkii aad isticmaasho Alt tag, waxuu mashiinka raadinta ogaanaa wax sawirka dhabtii uu yahay Qofka hawshaan gacanta ku haayo ee La taliyaha ah ayaa markaa bixin kara talooyin, baro macmiilka waxa la sameeyo iyo sida loo sameeyo. Shirkadaha ayaa u baahan qof noocaan ah oo qabiir ku ah hawlahaan dagalka ku saabsan sidoo kale qofka ganacsigaan bilaaba ayaa ku bilaabi kara asigoo gurigiisa jooga. Waa ganacsi wakhtigaaga iyo noloshaada aad adiga maamuli karto, awood badan ayaa gacantaada ku jirta, haddii aad aqoon fiican u leedahay lataliye-nimada cilmi barista dagalka.
Qurxinta Boggaga Dagalka
Haddii aad taqaano qaababka loo qurxiyo boggaga dagalka (internetka) waxaa jiro website-yo badan oo u baahan in wax loo qurxiyo. Adigoo gurigaada joogo ayaad raadini kartaa macaamilka u baahan in website-ka loo qurxiyo.
Waxaad marka horre raadisaa website-yada u baahan in shaqadaas loo qabto, kadibna raadi emailadooda iyo teleefoonadooda si aad ugu dhaadhiciso inaad u qurxin karto website-kooda sida uu hadda yahay si ka wanaagsan.
Waxaad kali oo aad u baahantahay kombuyuuter “computer”, internet, iyo barnaamijka sofwere-ka aad ku qaban lahayd hawshaas. Kadibna la imaaw qaabka aad wax ugu dhaadhicini lahayd website-yadaas.
Tifaftiraha Muuqaalada ‘video editor’
Ma leedahay qibrad wax lagu tifatiro? Ma tahay qof jecel qurxinta iyo wax soo saarista? Qofka qibradaan leh oo aad u isticmaali karo PhotoShop iyo Software-rada lagu qurxiyo muuqaalada iyo sawiraanta ayay ku habboon tahay innuu bilaabo ganacsigaan. Sidoo kale uma baahnid inaad xarun ka furato magaalada ee waxaad u baahan tahay inaad taqaano sida loo kasbado macaamiishaada.
Waxaa jira arroosyo u baahan in loo doobo muuqaalo qurxoon waliba loo tifatiro. Haddii la arko inaad si fiican hawshaan u qaban karto shaki kuma jiro inaad ka sameyn doonto dhaqaalle fiican.
Shaqsiyaadka Soomaaliyeed oo ku shaqeysta hawshaan waa kuwa intooda badan aanan balanta ku fiicnayn. Waxay yiraahdaan waqtigaas marka la gaaro muuqaalkaaga waa kuu diyaar, marka la gaaro wakhtigii lagu balamay dib ayay ugu dhacaan, wax diyaarsana lama haayo. Sidaas awgeed qofka hawshaan ganacsi bilaabaayo waa innuu noqda shaqsi ku wanaagsan balanta.
Dhibaatooyinka haysata ganacsata qaar waxaa wehel u ah inay been wax ku iibiyaan. Haddii aad rabto inaad bilaawdo ganacsigaan labo shey kudadaal, labadaas oo ah inaad illaaliso tayada muuqaalada aad sameynayso iyo balanta aad dadka u qabanayso.
Sida la wada ogsoon yahay, dad badan ayaa dareen ama fikir ganacsi maskaxdooda kusoo dhaca har iyo habbeen. Laakiin dadka intooda badani kuma dhiirradaan in fikradda ay meesha ka qaadaan ama u beddelaan wax qabad. Marka aad go’aansato inaad bilawdo fikrad ganacsi, diiradana saarto hadafkaaga sida adigoo baabuur wado, waxaad dhisi kartaa ganacsi faa’iido leh oo guulaysta, laakiin waxay u baahan tahay cilmi baaris iyo qorsheyn.
Tags: 10-ka Fikrado Ganacsi Aad Bilaabi Karto Adigoo Gurigaaga Jooga
Next post Sidee Ku Heli Karnaa Hooyo Caafimad Qabto, Saan u Lehno Cunig Caafimaad Qabo?
Previous post Weerarkii 9/11 "Waxa Aanu Leenahay Qorshe"
April 22, 2019 at 3:21 am	— Reply
Waa talooyin muslim ah